Miyey Soo Laabashada Allegri Ee Juve Soo Afjareysaa Waayaha Ronaldo Ee Bianconeri? – Garsoore Sports
Miyey Soo Laabashada…
Miyey Soo Laabashada Allegri Ee Juve Soo Afjareysaa Waayaha Ronaldo Ee Bianconeri?
Laba sano kaddib markii uu ka tagay kooxda Cajuusada, tababaraha reer Talyaani ayaa ku soo laabtay magaalada Turin, waxaana uu u muuqdaa inuu dib u habeyn ku sameynayo kooxda Bianconeri.
Massimiliano Allegri, wuxuu si cad u aaminsan yahay inuu guulo ka gaari karo ku laabashadiisa Juventus.
Waxaana jira sababo yididiilo leh. Si kastaba ha noqotee, Allegri ayaa si muran ku jiro u ogaa inay Juventus u baahantahay dib u habeyn ballaaran. seefta haddii uu galka kala baxana wuxuu qoorta ka jari doonaa qaar kamid ah cayaartooyda waaweyn.
Sannadkii 2019, kaddib markii shanaad ee isku xigta ee Scudetto, iyo kii siddeedaad oo isku xigta ee kooxda,waxaa lagu boorriyay madaxweynaha Bianconeri Andrea Agnelli inuu dib u habeyn ku sameeyo kooxda.
Sida laga soo xigtay Gazzetta dello Sport, waxaa xitaa loo sheegay inuu ka takhaluso (Cristiano) Ronaldo, kaasoo kaliya kaga soo biiray Real Madrid xilli ciyaareedkii ka horreeyay.
Marnaba ma jirin wax fursad ah oo taasi ku dhici lahayd, dabcan. Sida uu madaxweyne Agnelli laftiisu qirtay, Xiddiga reer Portugal looma soo saxiixan kaliya sababo isboorti; sidoo kale waxaa jiray arrimo dhaqaale oo uu ku lug lahaa.
Ugu dambeyntiina, Allegri ayaa lagu qasbay inuu baxo, iyadoo Fabio Paratici uu ahaa halyeeyga furaha bixitaankiisa.
Xaqiiqdii, isla markii la xaqiijiyay Arbacadii in qandaraaska Paratici ee agaasimaha isboortiga aan dib loo cusbooneysiin doonin xagaagan, waxaa cadaatay in wadada soo laabashada Allegri ay xaarrantahay.
Waxaa jiray dib u dhac guud tan iyo markii uu ka tagay Allegri sanadkii 2019. Awood la’aanta in la gaaro semi-finalka Champions League xitaa iyadoo Ronaldo uu hogaaminayo weerarka ayaa u taagan cadeymo aan la dafiri karin oo ah hoos u dhaca Old Lady.
Bedelka Allegri, Maurizio Sarri, wuxuu ku guuleystey inuu difaacdo horyaalka Serie A xilli ciyaareedkiisii kaliya ee qalalaasaha badnaa ee uu hogaaminayey laakiin Juve kuma ciyaarin wax la mid ah qaabkii tababarihii hore ee Napoli ee Allegri.
In ka yar 24 saacadood kaddib markii uu ruqseeyay mid ka mid ah taatikada ugu caansan Talyaaniga, Marwada duqda ah waxay u jeesatay inay si buuxda ugu barato Andrea Pirlo, shax-cayaareedkiisana wuxuu noqday mid la saadaalin karo inuu musiibo yahay.
Ciyaaryahankii hore ee qadka dhexe ee kooxda Juventus ayaa qaaday Coppa Italia laakiin haddii Napoli ay garaaci laheyd Verona maalintii ugu danbeysay ee Serie A, Juve xitaa uma soo bixi laheyn Champions League xilli ciyaareedka soo socda waxaana la oran karaa waa nasiib usoo bixitaankooda CL-ga xilli-cayaareedka xiga.
Shaki kuma jiro in ciyaartoyda sida Paulo Dybala iyo Giorgio Chiellini ay ku farxi doonaan soo laabashada Allegri. Goal waxay ogaatay in Allegri uu durbaba Juve ku amray inay Dybala qandaraas cusub ka saxeexaan.
Magacaabista 53-sano jirkaan ayaa sidoo kale ka caawin karta baacsiga Juve ay ku dooneyso ciyaartoydii hore ee Milan Manuel Locatelli, oo haatan ka tirsan Sassuolo iyo Gigi Donnarumma, oo hadda ka tagay San Siro, isla markaana lagu heli karo beeca xorta ah.
Xaqiiqdii ma jirto waddo uu Allegri aqbali lahaa inuu ku laabto Turin iyadoon la xaqiijin in kooxda la xoojin doono xagaaga.
Sida kooxo badan oo kale oo caan ah, Juve waxay leedahay dhibaatooyin dhaqaale, waana taas sababta Agnelli uu u diidayo inuu ka quusto tartanka European Super League ee uu jecel yahay.
Cristiano Ronaldo ayaa soo dhigay waxa ay taageerayaal badan ka baqeen inuu ahaa macasalaamayn sagootin ah isbuucii la soo dhaafay taas ayaa laga yaabaa inay tahay arrin loo qaadan karo bixistiisa.
Adeeega Ronaldo si aad ah ayaa loo tabayaa laakiin, waxkasta oo dhaca, way cadahay in Juventustan cusub ay u baahan tahay in lagu dhiso cayaartooyda sida Dybala, Matthijs de Ligt, Federico Chiesa iyo Dejan Kulusevski.
Allegri waligiis eedeyn ma uusan saarin Ronaldo, xitaa kaddib markii uu ka tagay Juventus, isagoo doorbiday inuu si diblomaasiyadeed uga hadlo arrimaha la xiriira xiddigan shanta jeer ku guuleystay Ballon d’Or.
However, Ronaldo was very open about the fact that he preferred Sarri’s more attacking brand of football to Allegri’s very pragmatic approach. It is also worth nothing that he only scored 21 times in Serie A during his one season under the former AC Milan coach. That total reached 31 under Sarri and 29 with Pirlo.
Si kastaba ha ahaatee Ronaldo marwalba wuu u furnaa aragtida inuu doorbidayo shax weerareedka tababarihii hore ee kooxda Mauricio Sarri iyadoo aanu ku qanacsaneyn midka Allegri. waxaa taasi caddeeyn u ah in uu keliya dhaliyay 21 gool markii uu kahoos cayaarayay Allegri balse markii uu yimid Sarri wuxuu dhaliyay 31 gool iyadoo 29 gool uu dhaliyay isagoo Pirlo leylinaya kooxda.
Allegri, si kastaba ha ahaatee, shaki la’aan wuxuu ahaa dooqa ugu wanaagsan ee suurtogalka ah ee koox baahi daran u qabta xasilooni iyo tababare heer sarre ah.
Kaddib markii la ogaaday soo laabashada Allegri iyo xilli-cayaareedka niyadjabka leh ee Juventus waxaa la ogaaday inay jiraan kooxo badan oo daneynaya inay Ronaldo ka kaxeeyaan Turin, ma ahayn oo kaliya Inter kuwa soo raadiyay adeegyadiisa; Real Madrid isagana way dooneysay inay dib u ceshato.
Marka laga hadlayo, soo laabashada Allegri waxay dhab ahaantii Juve ka dhigi kartaa inay mar kale u dhaqaaqdo dhanka saxda ah.
XASAASI: Liverpool Oo Qarka U Saaran Saxiixa Ibrahima Konate – Heshiis Ayay La Gaareen
XASAASI: Man United Oo Dooneeysa Inay De Gea Dhaafsato Oblak